Apple dia manavao ny AirPods, AirPods Pro ary AirPods Max | iPhone News
Apple dia manavao ny AirPods, AirPods Pro ary AirPods Max
louis padilla | 10/05/2022 22:12 | Fitaovana IPhone, About us
Apple dia nanangana a fanavaozana firmware vaovao ho an'ny karazana headphone tsy misy tariby ka tonga amin'ny version 4e71 vaovao.
Raha manana AirPods sasany ianao dia manana fanavaozana vaovao azo alaina hanavao azy ireo. Raha ny tokony ho izy, Apple dia namoaka kinova vaovao momba ny firmware ho an'ny AirPods 2 sy 3, AirPods Pro ary AirPods Max, tsy misy afa-tsy ny AirPods taranaka voalohany, izay tsy amidy hatry ny ela. Ny firmware vaovao dia antsoina hoe 4e71, ary hapetraka ho azy amin'ny sofinao. Apple dia tsy manome antsipiriany momba ny fanavaozana ny écouteur, ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maningana amin'ny mahazatra, ka amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika ny vaovao miaraka amin'ity fanavaozana ity.
Ahoana no ahafantarana ny kinova firmware ananan'ny AirPods anao? Mora ny mahafantatra, mila mampifandray fotsiny ny AirPods ianao, na inona na inona modely, amin'ny iPhone na iPad-nao, ary ao anatin'ny Settings, ao amin'ny fizarana ankapobeny ary ao anatin'ny submenu Information, azonao atao ny manamarina ny dikan-tsarimihetsika napetraka. Tena ilaina ny mampifandray ny AirPods amin'ny alàlan'ny Bluetooth, raha tsy izany dia tsy hiseho eo amin'ny efijery ilay singa menu.
Ahoana ny fomba hamoronana ny fanavaozana ny AirPods? Tsy misy fomba hanombohana ny fanavaozana amin'ny tanana, noho izany dia tsy maintsy miandry ny firmware vaovao ianao mba hisintona amin'ny headset ary hametraka. Ny hany fomba hanafainganana ny dingana dia ny mametraka ny AirPods amin'ny raharahany, mametraka azy ireo amin'ny fiampangana ary manokatra ilay raharaha mba hifandraisana amin'ny iPhone na iPad-nao, ary amin'izany fomba izany dia toa haingana kokoa ny fampidinana ny fanavaozana.
Efa nanavao ny AirPod-nao ve ianao? Mahatsikaritra fiovana ve ianao aorian'ny fametrahana ny firmware vaovao? Eny ary, mametraha fanehoan-kevitra miaraka amin'ny vaovao azonao fantarina. Havoakanay ny vaovao raha vao mahafantatra bebe kokoa momba ity dikan-teny vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia manavao ny AirPods, AirPods Pro ary AirPods Max
Tamin'ny fanavaozana farany dia voampanga ny airpods taranaka voalohany, izay nandoro ny bateria. afaka namoaka an'io firmware io koa izy ireo mba hanandrana hanamboatra azy.
Tena matahotra aho fa raha tsy miaraka amin'ity fanavaozana ity na amin'ny manaraka dia ho voaloa ny airpods andiany faharoa novidiko. Raha mitranga indray izany dia hialako mandrakizay ny ecosystem iphone. Efa tena ambany ny fandeferako.
Ny antsipiriany momba ny haben'ny efijery vaovao amin'ny iPhone 14 Pro sy 14 Pro Max
NapBot ho an'ny Apple Watch dia havaozina miaraka amin'ny famakafakana apnea torimaso